Vaovao - Midira amin'ny Index Higg
Midira amin'ny Index Higg
Novokarin'ny Coalition ho an'ny akanjo maharitra, ny Higg Index dia fitaovana iray ahafahan'ny marika, mpivarotra ary ny kojakoja amin'ny habe rehetra - isaky ny dingana amin'ny dia maharitra - handrefesana sy hamaritana ny fahombiazan'ny orinasa na ny vokatra maharitra. Ny Higg Index dia manome topy maso iray manontolo izay manome fahefana ireo orinasa hanao fanatsarana misy dikany izay miaro ny fiadanan'ny mpiasa ao amin'ny orinasa, ny vondrom-piarahamonina eo an-toerana ary ny tontolo iainana.
Ny fitaovana Higg Facility dia mandrefy ny fiantraikan'ny fitohizan'ny tontolo iainana sy sosialy amin'ny toeram-pamokarana manerantany. Misy fitaovana roa Higg Facility: Module tontolo iainana Higg Facility (Higg FEM) ary Modely sosialy sy asa sosialy ho an'ny mpiasa (Higg FSLM).
Manara-penitra ny fandrefesana ny fiatraikany ara-tsosialy sy ara-tontolo iainana amin'ny trano fampitaovana
Famokarana akanjo, kiraro ary lamba dia tanterahina amin'ny fotodrafitrasa an'arivony eran'izao tontolo izao. Ny fotodrafitrasa tsirairay dia mitana andraikitra lehibe amin'ny faharetan'ny indostria amin'ny ankapobeny. Ny Higg Facility Tools dia manolotra fanombanana ara-tsosialy sy ara-tontolo iainana manara-penitra izay manamora ny fifanakalozan-kevitra eo amin'ireo mpiara-miombon'antoka amin'ny lanja manatsara ny lafiny ara-tsosialy sy tontolo iainana.
Modely momba ny tontolo iainana Higg Facility
Ny vidin'ny tontolo iainana amin'ny famokarana sy fanaovana akanjo dia lafo. Ny fanaovana pataloha jeans mahazatra dia mitaky rano 2 000 litatra sy angovo 400 megajoule. Vantany vao novidina, ny fikarakarana an'io pataloha jeans io ihany mandritra ny androm-piainany dia afaka mamoaka dioksidan'ny karbaona mihoatra ny 30 kilao. Izany dia mitovy amin'ny familiana fiara 78 kilaometatra.
Ny Higg Facility Environmental Module (Higg FEM) dia mampahafantatra ireo mpamokatra, marika ary mpivarotra ny zava-bitan'ny tontolo iainana ny toerana misy azy ireo tsirairay avy, manome hery azy ireo handanjalanja ny fanatsarana ny faharetana.
Ny Higg FEM dia manome sary mazava ny fiantraikan'izy ireo eo amin'ny tontolo iainana. Manampy azy ireo hamantatra sy hanao laharam-pahamehana ireo fotoana hanatsarana ny fampisehoana.
Modely ara-tsosialy sy asa i Higg Facility
Mendrika ny miasa ny tsirairay amin'ny tontolo azo antoka sy salama izay ahazoany karama ara-drariny. Mba hanatsarana ny fepetra ara-tsosialy sy ny asa ho an'ireo mpiasa izay mamokatra akanjo, lamba ary kiraro an'arivony isan-taona, ny marika sy ny mpanamboatra dia mila mandrefy voalohany ny fiatraikany ara-tsosialin'ny fotodrafitrasa manerantany.
Ny Module Higg Facility Social & Labor (Higg FSLM) dia mampiroborobo ny fepetra ara-tsosialy sy ara-tsosialy azo antoka sy ara-dalàna ho an'ireo mpiasa manana ny lanja manerantany. Afaka mampiasa ny tombana azo isaina ireo fotodrafitrasa hahafantarana ireo toerana mafana sy hampihenana ny havizanan'ny fanaraha-maso. Raha tokony hifantoka amin'ny fanarahan-dalàna izy ireo dia afaka manokana fotoana sy loharanon-karena amin'ny fanovana maharitra maharitra.
Tohizo ny fidirana amin'ny HIGG hahatratrarana tombana tena vaovao izay ahafahan'ny orinasa manombatombana ireo karazana fitaovana, vokatra, zavamaniry ary ny fizotran'ny fizotrany ao anatin'ny tontolon'ny safidin'ny endrika tontolo iainana sy ny vokatra.
Ny Index HIGG dia fitaovana fitaterana maharitra maharitra ampiasain'ny mpanamboatra maherin'ny 8.000 sy marika 150 manerantany. Manala ny filana ny fandinihan-tena miverimberina izany ary manampy amin'ny famaritana ireo fotoana hanatsarana ny fahombiazana.
Fotoana fandefasana: Apr-05-2020